Ny vokatr'i Isaia - Gregg Braden (PDF) - Afrikhepri Fondation
Ny vokatry ny Isaia
Ny vokany Isaia - Gregg Braden (PDF)
Dn ny Isaiah Effect, Gregg Braden, mpanoratra ny Zero Point Awakening sy Walking Antara Worlds, dia manambatra ny fikarohana natao tamin'ny fizika be loatra tamin'ny sanganasan'ny mpaminany Isaia sy ireo Esenianina taloha. Mampiseho izany fa ny faminaniana momba ny loza sy ny fijaliana miparitaka dia mety ho azo atao ihany, fa tsy maminavina ny loza hitranga, ary raha ny marina dia manana hery hitaomana ireo fahafaha-manao ireo isika. Mety hisy ve ny siansa very izay mamela antsika hihoatra ny fahitana ara-paminaniana momba ny ady, ny aretina ary ireo loza lehibe indrindra mety hanjo ny zanak'olombelona?
Azo atao ve ny manadino fisehoan-javatra taloha namela fisehoan-javatra iray izay namela banga ny fahalalantsika ny fifandraisantsika tsirairay sy ny tontolontsika? milaza fa eny ny valin'ireto fanontaniana ireto sy ny hafa. Ankoatr'izay, amin'ny alàlan'ny fiteny iray izay vao manomboka takatsika, dia mampahatsiahy antsika ny mpanoratra fa manana teknolojia roa isika izay manome antsika hery hisafidy ny toetran'ny vatantsika sy ny hoavin'izao tontolo izao.
Ny voalohany dia ny siansa amin'ny faminaniana, izay ahafahantsika mahazo fahalalana momba ny ho avy vokatry ny safidin'ny tsirairay sy ny besinimaro ataontsika amin'izao fotoana izao. Ny faharoa dia miresaka momba ny haitao an'ny siansa mivavaka very, izay ahafahantsika misafidy izay faminaniana tianay hiaina. Isaky ny mampihatra izany isika dia miaina ny vokatr'i Isaia.
12 ampiasaina amin'ny € 18,00
Vidio € 20,98
Nohavaozina farany tamin'ny 16 aprily 2021 6:02 maraina
Mainty ny Egyptianina ary niavian'ny siansa maoderina rehetra (Lahatsary)
Mpiambina ny Tany - Rakitra fanadihadiana (2017)
Watch Tenet (2020)
Izay mandoa ny trosany dia mihatsara kokoa - Bhikkhu Revata
Sekolin'ny misterin'ny Egyptiana taloha - Tahirin-kevitra (2008)